हरियो प्याजले निको पार्छ यस्ता रोगहरु, जसकाे बारेमा धेरैलाई थाहै नहुनसक्छ !(जानीराख्नुहोस)
स्वास्थ्य : हरियो प्याजले निको पार्छ यस्ता रोगहरु, जसकाे बारेमा धेरैलाई थाहै नहुनसक्छ ! हरियो प्याज स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिनछ ।
यो एउटा कन्दमुल हो । यसको सेवन गर्दा विभिन्न किसिमका रोग बाट मुक्त हुन सकिन्छ । धेरै जसो मानिहिरुलाई थाहा नहुन पनि सक्छ यसको सेवन गर्दा कति फाइदा हुन्छ भनेर हरियो प्याजले मोटो शरीरको तौल पातलो बनाउँछ ।
यसले ब्ल्ड सुगर लेभललाई कन्ट्रो’ल गर्ने भएकाले डायबे’टीजको बिरा’मीलाई निक्कै फाइदा पु¥र्‍याउँछ। यसमा एन्टी इन्फ्ले’मेटरीको गुण भएकाले यसले अर्थराइटिस हुनबाट जोगाउँछ । हरियो प्याजमा भिटामिन ए समेत रहेको हुँदा यसले आँखाको
ज्योति बढाउनुका साथै रतन्धो हुनबाट पनि जोगाउँछ । यसमा एन्टी ब्याक्टे’रियल गुण भएकाले यसले रु’घाखोकी तथा टाउँको दुखेकोलाई सन्चो बनाउँछ।
यसमा भिटामिन सी को मात्रा धेरै हुने भएकाले कम’जोरी हटाउँछ र भरपूर शक्ति प्रदान गर्दछ । हरियो प्याजमा फाइबरको मात्रा धेरै हुने भएकाले पाचनप्र’णालीमा समेत सुधार ल्याउँछ ।
२०७८ जेष्ठ २६, बुधबार ११:०३ गते 1 Minute 463 Views